'Uluhlu lweeSandi zoSandman' eziza kweli hlobo kwiVidiyo kunye neDC
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo 'Uthotho lweeSandi zoSandman' eziza kweli hlobo ukuVakala kunye neDC
'Uthotho lweeSandi zoSandman' eziza kweli hlobo ukuVakala kunye neDC
by Waylon Jordan Matshi 4, 2020
ibhalwe ngu Waylon Jordan Matshi 4, 2020
Uthotho lweNoveli kaNeil Gaiman, I-Sandman, ibiyintandokazi yabalandeli okokoko yapapashwa okokuqala ngo-1989, kwaye kweli hlobo, abalandeli baya kuba nendlela entsha ngokupheleleyo yokonwabela abalinganiswa ngedrama entsha yomdlalo weqonga oVakalayo kunye ne-DC Comics ebaliswa nguGaiman ngokwakhe.
Ekhokelwa ngu-Dirk Maggs, uhlengahlengiso luya kubonisa uyilo olomeleleyo lwesandi kunye nesityebi, isandi sokuntywila ngokutsho kukhuphelo lweendaba esisandul 'ukulufumana. UMaggs usebenze noGaiman ngaphambili esenza ulungelelwaniso lweaudio Amakhwenkwe ka-Anansi, Iimpawu ezilungileyo, naphi na, yaye Stardust.
Xa umntu osebenzelana nemimoya ezama ukubamba ukubhubha ukuze afumane ubomi obungunaphakade, ngempazamo wabambisa umninawa wokufa uMorpheus, uKumkani wamaPhupha. Emva kweminyaka engama-XNUMX entolongweni kwaye ekugqibeleni abaleke, uMorpheus uyaqhubeka nokufuna ukubuyisa izinto zakhe ezilahlekileyo zamandla kunye nokwakha kwakhona umbuso wakhe. The Sandman Ulandela uMorpheus, kunye nabantu kunye neendawo ezichaphazelekayo, njengoko ezama ukulungisa i-cosmic kunye neempazamo zabantu azenzileyo ngexesha lokuphila kwakhe okungapheliyo.
UGaiman uthathe inxaxheba kuwo onke amanyathelo enkqubo, ukuzisa I-Sandman kubomi bokulalelwayo kunye noMaggs.
“Phantse kwiminyaka engama-30 eyadlulayo, uDirk Maggs waya kwi-DC malunga nokuziqhelanisa I-Sandman kwifom yeaudiyo. Khange yenzeke (nangona ibiyindlela yam yokuqala noDirk yokuwela iindlela) kwaye ndiyavuya ukuba khange yenzeke, kuba sikwiGolden Age yemidlalo yedrama ngoku, kwaye mna noDirk singcono kakhulu Siyenza, ”utshilo uGaiman kwingxelo. Olu lulungelelwaniso olutyebileyo lweaudio I-Sandman Iinoveli zoMzobo, ezenziwe ngobuciko nguDirk Maggs, ngenkqubo yeenkwenkwezi zonke. Ndikuthandile ukubakhona ukuze ndiphose abantu, apho ndifunde izikripthi kwaye ndinike iingcebiso ngamanye amaxesha, kwaye phaya kwizitudiyo, ukubukela umlingo uyenziwa kunye nokurekhoda ingxelo. Andinakulinda de ihlabathi live ukuba senzeni. ”
"Olu phindaphindo lomsindo I-Sandman inkulu kakhulu kububanzi nakumabhongo kwaye isekelezelwe ngokukodwa kumanqaku okuqala kaNeil kunye nezikripthi zothotho lweempawu zakhe ze-DC. Imveliso yethu ingena nzulu kwingcinga kaNeil, ngokungathi ubhala la mabali ecaleni kwethu, ephakamisa iinkcukacha kunye namabali ambalwa abebewazi kude kube ngoku, ”wongeze watsho uMaggs. "I-odiyo iyanelisa ngokukodwa incwadi yamahlaya yokubonwa kweengcali kunye nokuqaqamba kukaNeil, ngelixa umlingisi wethu omangalisayo kunye nomculo kaJim Hannigan usongeza umthwalo omtsha weemvakalelo. Ixesha lale projekthi lokuthabatha ixesha leshumi leminyaka lifanelekile kuyo yonke imizuzu yokulinda. Ngoyena ndoqo kaSandman kaNeil Gaiman. ”
I-Sandman ibe yipropathi eshushu kwiminyaka edlulileyo kunye neenzame ezininzi zokuziqhelanisa nokuzilungisa, uninzi lwazo zisilele ukufikelela kwiziqhamo – kwakusandula ukwaziswa ukuba INetflix ibikhethe ukulungelelaniswa kwebali-Ngoko ke kuya kuba yinto ekhethekileyo kubalandeli ukuba bafumane olu tshintsho lomsebenzi kaGaiman.
Ungajonga ISIQINISEKISO SEAUDIO kuthotho olutsha ngo UKUQALA KAPHA.
Akukho lizwi okwangoku ekuphoseni uthotho lweaudiyo. Ufakelo lokuqala lwe I-Sandman ziya kufumaneka ngokukhuphela ihlobo le-2020 ngesiNgesi kunye nokukhutshwa okulandelayo ngesiFrentshi, isiJamani, isiTaliyane neSpanish.
iyavakalaDC ComicsI-Dirk MaggsMorpheusNeil GaimanI-SandmanWaylon Jordan
'IHocus Pocus 2' ifumana uMlawuli wayo kwiDisney
UScott Derrickson uthatha ngaphezulu 'kweBermuda' kuSam Raimi